Football Khabar » बार्सिलोनालाई हराउँदै भ्यालेन्सियाले जित्यो कोपाको उपाधि !
बार्सिलोनालाई हराउँदै भ्यालेन्सियाले जित्यो कोपाको उपाधि !
लगातार चार सिजनको च्याम्पियन बार्सिलोनालाई हराउँदै भ्यालेन्सियाले कोपा डेल रे फुटबलको उपाधि जितेको छ । नेपाली समयअनुसार आइतबार बिहान भएको फाइनल खेलमा भ्यालेन्सियाले बार्सिलोनामाथि २–१ को जित निकाल्दै उपाधि पोल्टामा पारेको हो ।
यससँगै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगबाट आउट भएको बार्सिलोनाको घाउमा भ्यालेन्सियाले अर्को चोट थपिदिएको छ । बार्सिलोना यो उपाधि जितेर च्याम्पियन्स लिगमा व्यहोरेको निराशामा थोरै भए पनि मल्हम लगाउन चाहन्थ्यो । तर, उसको सपना भ्यालेन्सियाले चकनाचुर पारिदियो ।
त्यसपछि दोस्रो हाफमा खेलमा फर्किन संघर्षरत बार्सिलोनाका लागि ७३औं मिनेटमा कप्तान लिओनल मेस्सीले १ गोल गरेर खेल २–१ बनाए । तर, त्यसपछि उसले थप गोल गर्न सकेन । र, खेल भ्यालेन्सियाले २–१ ले जित्यो ।
यससँगै भ्यालेन्सियाले ११ वर्षपछि आठौंपटक कोपाको उपाधि जितेको छ । बार्सिलोनाले यो उपाधि सर्वाधिक धेरै ३० पटक जितेको छ ।
भर्खरै सकिएको सिजनमा बार्सिलोना ला लिगा च्याम्पियन बनेको थियो भने भ्यालेन्सिया चौथो स्थानमा रहँदै सिजन पूरा गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति ११ जेष्ठ २०७६, शनिबार २०:५७